Dad badan oo lagu xiray Bosaaso - BBC News Somali
Dad badan oo lagu xiray Bosaaso
19 Luulyo 2010
Image caption Dad ku xiran Boosaaso
Booliska magaalada Boosaaso ayaa maanta qabqabtay dad fara badan, kuwaas oo si guud looga ururiyay waddooyinka magaalada gudaheeda iyo suuqyada.
Waxaa la sheegayaa in arrintani ay qayb ka tahay olole uu maamulku ku doonayo inuu ku xaqiijiyo ujeeddooyin la xiriira xagga ammaanka, gaar ahaana magaalada Bosaaso oo waayadan dambe ay dhacayeen qaraxyo iyo dilal lagu beegsanayo saraakiisha dawladda, waxaana sida la sheegayo ololuhu saamayn ku yeelan doonaa dadka ka soo jeeda gobollada kale ee Soomaaliya ee ku sugan Boosaaso qaarkood.
Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda oo ku aaddan inta ay tiro ahaan la'egyihiin dadka la qabqabtay tan iyo saaka, hase ahaatee waxaa la sheegayaa in dadka lagu ururinayo goobo loo asteeyay in la isugu geeyo meelahaas oo la sheegayo in la geeyay dad afar boqol gaaraya.
Waddooyinka magaalada Bosaaso oo dhan ayaa arrintan si wayn looga dareemay, waxaana qaybaha magaalada lagu arkayay maanta ciidamo xoog leh iyo baabuurta shabaqlaha oo lagu gurayo dadka waddada maraya gaar, ahaan dhallinyarada aan markaas ku sugnayn goobo waxbarasho ama meherado ay ka shaqeeyaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari Sh.C.xaafid Cali Yusuf oo aan la xiriiray wuxuu sheegay in qorshahani uu yahay mid lagu beegsanayo dadka ka soo jeeda gobollada kale ee Soomaaliya, taas oo uu sheegay in looga gol leeyahay in wax looga qabto ammaanka magaalada Bosaso oo waayadan dambe ka soo darayay.
Guddoomiyuhu wuxuu intaas ku daray in dadka maanta la qabqabtay ay ku jiraan dad u dhashay degaanka, hase ahaatee markii la kala saaro oo la baaro ka dib qofkii aan horay dembi u gelin la siidayn doono qofkii loo aqoonsado inuu ka mid yahay dadka ammaandarrida wadana sharciga la horgayn doono.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Cali Yusuf Cali ayaan isagana wax ka waydiyay sababta dadka loo qabqabanayo, wuxuuna tilmaamay in dawladdu ay bilaabayso barnaamij ballaaran oo ay ku xoojinayso ammaanka isla markaasna ololaha ka billowday Bosaaso uu arrintaas ka mid yahay.
'' Arrintaasi way jirtaa waxayna qayb ka tahay qorshe ama barnaamij ay dawladdu ku doonayso inay ku sugto ammaanka Bosaaso, dadka la qabtayna waa la baari doonaa oo la kala sooci doonaa wixii aan dembi lahayn waa la siidayn doonaa qofkii dembi lagu helana sharciga ayaa la horgayn doonaa.'' Inkasta oo ujeeddada dawladdu ay ku wajahan tahay sugidda ammaanka, haddana marka arrimaha noocan oo kale ahi ay dhacaan, waxay walwal ku abuuraan dadka ka soo jeeda koofurta Soomaaliya, ee sida caadiga ah ugu nool gobolka isla markaasna ku haysta danaha ganacsi iyo nolosha caadiga ah kuwaas oo tallaabooyinka noocan ah ku fasira in iyaga lagu takoorayo.